Soo dejisan Output Messenger 1.9.33 Server... – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Output Messenger
Rasmiga Rasmiga ah – wargeeys ujeedkiisu yahay inuu hagaajiyo iskaashiga wadajirka ah ee u dhaxeeya xubnaha kooxda. Software waxay bixisaa siyaabo badan oo fariimo deg deg ah, oo ay ku jiraan fariimo gaar ah iyo kooxo, waraaqo gudaha ah, shirarka codka iyo fiidiyowga, wadaagista mashiinka fog, qoraalada iyo xasuusiyeyaasha abuuraya, iwm. Natiijada Rasmiga ah waxaa loogu talagalay wareysi macmiil macaamiisha kaas oo ah xal aad u fiican ilaaliyaan xogta lagu gudbiyo shabakada deegaanka ama VPN. Software waxay taageertaa nuqul fariimo deg-deg ah oo ku saabsan dhammaan qalabkaaga oo leh xisaab furan oo isku mid ah. Rasmi-bixinta wuxuu kuu ogolaanayaa inaad qaadato shaashadda muraayada, u rogto sawirada isla markaana la wadaagto shaqaalahaaga si deg deg ah. Nidaamku wuxuu sidoo kale ilaalin karaa wadahadal ka dhanka ah shabakada dibadda adoo codsanaya iyo is-dhexgalinta codsiyada aad ugu jeceshahay API.
Wicitaannada codka iyo fiidiyowga
Wadaagista la wadaago
Wadahadal kooxeed iyo wadaag wadaag
Xusuusin iyo xusuusin
Isdhexgelinta codsiyada dibadda
Soo dejisan Output Messenger
Faallo ku saabsan Output Messenger
Output Messenger Xirfadaha la xiriira
Exiland Backup Free – waa barnaamij software gurmad ah. Software-ka wuxuu awood u siinayaa inuu keydsado nuqulada gurmadka ah ee sidayaasha xogta leh, mashiinka maxalliga ah ama FTP-server-yada.